အခန်း (၆) Excess to the Road (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အခနျးခွော: ပိုလျှံဖို့လမ်းမကြီး (2008)
ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်မှအခန်း ၆ မှ“ Excess to the Road” အခန်း ၆ ကိုကြည့်ပါ Cupid ၏အဆိပ်မြှား - အကျင့်မှသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသဟဇာတဖြစ်သည်. ဒါဟာညစ်ညမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူဆကျဆံ။ ဒီမှာအကျဉ်းချုပ်နှင့်လင့်ခ်တစ်ခုပါ တစ်ခုလုံးကိုမျြးအခနျးကွီး၏ PDF ဖိုင်ရယူရန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါတို့၏ ဦး နှောက်သည်နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သကြားဓာတ်နှင့်လိင်အခွင့်အလမ်းများရှားပါးသောအချိန်တွင်အစားအစာနှင့်လိင်ကိုအရက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ် circuit ကိုထိခိုက်နိုင်သော supernormal လှုံ့ဆော်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ၎င်းသည်ဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများ၊ စိတ်အားတက်ကြွစေသည့်တွန်းအားများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ ပိုမို၍ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အနိမျ့ dopamine ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနောက်ကွယ်မှဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အတူပေါင်းသင်းနေတဲ့ cue မြင်သောအခါက spikes ။ ပြင်းထန်သောမတရားသောနှင့်မကြာခဏ compulsive, ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကပြန်လာအလွန်စိန်ခေါ်မှု equilibrium စေ။